Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Njem nlegharị anya Jamaica: Nchekwa spa na ahụike na akwụkwọ ntuziaka ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị na-arụ ọrụ na mpaghara spa nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Jamaica ga-erite uru site na akwụkwọ ntuziaka arụpụtara iji duzie ha n'inwe nchekwa, ịrụ ọrụ nke ọma na ọkachamara n'ihe ha na-eme mgbe ha na-abanye n'ime ụlọ ọrụ ahụike na ịdị mma zuru ụwa ọnụ $4.4.
Akwụkwọ ntuziaka nchekwa COVID-19 maka ngalaba Spa na Jamaica, nke Tourism Linkages Network (TLN) mepụtara, ngalaba nke nkwalite nkwalite njem nlegharị anya (TEF), na-enye ntụzịaka na ntụzịaka zuru oke maka ndị na-arụ ọrụ spa na-eje ozi na ngalaba njem iji hụ na ahụike na ahụike. nchekwa nke ndị ọrụ na ndị ọbịa site na ibelata mgbasa nke COVID-19 n'oge ọrụ ọgwụgwọ spa.
Ihe dị n'ime akwụkwọ ntuziaka a na-agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ nke Ministry of Health and Wellness, Ministry of Tourism's Health and Security Protocol, yana nke International Spa Association, World Health Organisation na International Standards Organisation.
N'ikwu okwu na mmalite mmalite nke akwụkwọ ntuziaka na TLN's Natural Skincare Product Development Workshop na nso nso a, Minista njem nlegharị anya, Hon. Edmund Bartlett kwuru na ahụike na ịdị mma bụ isi ihe na-eme njem na ngalaba ile ọbịa ka ndị mmadụ na-ele anya ịgbake n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke inertia nke ọrịa COVID-19 wetara.
O kwuru na enwere mbọ ike zuru ụwa ọnụ iji rite uru na ahịa ahụike yana Jamaica nwere ọnọdụ nke ọma iji nweta iberibe achịcha akụ na ụba mana "anyị ga-akwadorịrị ma dịrị njikere imezu ihe ndị njem na-eso COVID ga-atụkwasị onye ọ bụla n'ime anyị."
Ọtụtụ mba ndị na-asọmpi enweghị ọkara nke akụ ndị Jamaica ji gọzie, Minista Bartlett kwuru, “COVID-19 atụgharịala ọtụtụ ajụjụ dị oke egwu; nke na-eme ugboro ugboro, ndị ọbịa nwere ike inwe ahụ iru ala ịbịta ebe anyị na-erite uru na ngwaahịa niile anyị na-ere ha?
O kwuru na site na mmesi obi ike ebe ọ na-aga ugbu a bụ ihe dị mkpa na isi maka ịga nke ọma njem nlegharị anya n'ọdịnihu, Jamaica ga-agbasi mbọ ike na nkwa ọ na-ekwe ndị ọbịa, "na-emesi ha obi ike na ha nwere ezigbo ahụmahụ, nchekwa na enweghị nkebi, nke na-asọpụrụ obodo na gburugburu ebe obibi."
Minista Bartlett kwusiri ike nye ndị na-arụ ọrụ spa mkpa ọ dị imeziwanye na nnyefe nke akụkụ dị oke mkpa nke mmesi obi ike ebe ị ga-aga site na "ịrụ ọrụ nke ọma, ịdị irè, na ọrụ ọkwa dị elu na-agbanye n'akụkụ niile nke ahụmahụ onye ọbịa." Nke a na-akpọ maka inwe ụlọ ọrụ nke mbụ, ndị ọrụ zụrụ azụ na ngwaahịa ndị na-adọrọ adọrọ nke na-agbaso ụkpụrụ ahịa mba ụwa, o kwuru.
Minista Bartlett kwuru na ọ dị ezigbo mkpa na TLN's Health and Wellness Network achọpụtala ngwaahịa ịdị mma, ọkachasị ndị enwere ike imepụta na mpaghara ma tinye ya na spas, dịka akụkụ bụ isi nke atụmatụ ya iji mepụta ngwaahịa njem nlegharị anya ahụike na ịdị mma nke Jamaica.
"Dịka a amụma nke Ministry of Tourism, anyị na-agba mbọ na mmepe nke njem nlegharị anya ụlọ ọrụ na-enye ezigbo. Ahụmahụ Jamaica ya na ụkpụrụ omenala dị iche iche. Nke a na-agụnye inye ndị ọbịa anyị ohere, ngwaahịa ụmụ amaala nke ndị nwere nkà mepụtara ma mepụta, "ka ọ gbakwụnyere.
Ndị bịara ọmụmụ ihe ahụ, ma n'ịntanetị ma n'anụ ahụ na Montego Bay Convention Center, nụkwara site n'ọnụ Onye isi oche nke TLN's Health and Wellness Network, Kyle Mais, onye rụtụrụ aka na uru ụlọ ọrụ spa zuru ụwa ọnụ na ọtụtụ ngwaahịa nwere ike ịbụ. emepụtara na mpaghara site na akụrụngwa Jamaica.
Ha nụkwara site n'ọnụ Dr. Aisha Jones, bụ onye ya na TLN rụkọrọ ọrụ dịka onye ndụmọdụ maka ịmepụta akwụkwọ ntuziaka. O kwuru na na ná mmalite, pasent 72 nke ndị njem nọ na-atụ ụjọ ịga leta spa, pasent 80 dị njikere ugbu a itinyekwu ego na ọgwụgwọ spa.
A kọwakwara na akwụkwọ ahụ dị ngwa ngwa, ebe ndị nwere mmasị nwere ike ịnweta ya akwụkwọ ntuziaka n'ụdị dijitalụ ebe a ma ọ bụ kpọtụrụ TLN site na adreesị ozi-e a ka ịnakọta otu nnomi: tourismlinkages@tef.gov.jm .